Pope Francis oo ku baaqay in ergo caalami ah loo saaro xiisadda Kuuriyada Woqooyi - BBC Somali
Pope Francis oo ku baaqay in ergo caalami ah loo saaro xiisadda Kuuriyada Woqooyi
Image caption Baadariga ugu sareeya kaniisadda Catholic-ga, Pope Francis
Baadariga ugu sareeya kaniisadda Catholic-ga, Pope Francis, ayaa ku baaqay in la galo dhexdhexaadin caalami ah si loo dejiyo xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa Maraykanka iyo Kuuriyada Woqooyi ee ku saabsan hawlaha nukliyeerka ee dalkaas.
Baadarigu wuxu carrabka ku dhuftay in tusaale ahaan dalka Norway "had iyo goor ba u heelanaa inuu gacan ka gaysto arintaa".
Waxa kale oo uu ka digay in xiisadda taagani hurin karto dagaal lagu hoobto oo " in badan oo aadamaha ahi" ku hallaagmi karaan.
Hadalkan Baadarigu wuxu soo baxay saacado uun ka dib markii Kuuriyada Woqooyi tijaabisay gantaal kale oo nooca ballistic-ga ah, oo Maraykanka iyo Kuunfur Kuuriya sheegeen in tijaabintiisu fashilantay oo aanu meel gaadhin.
Koonfur Kuuriya ayaa sheegtay in gantaalka laga ganay meel ku taal koonfurta gobolka Pyeongan oo xaga woqooyi ka xigta xarunta dalkaas ee Pyongyan.
Tijaabooyinka gantaalaha ee ay waddo Kuuriyada Woqooyi ayaa xiisad adag dheliyey, taas oo ay sii xoojisay go'aankii Maraykanku raxan maraakiibta dagaalka ah ugu diray badda Kuuriya.